Boris Johnson (nna nna Ottoman) nwere ike ibido ọgba aghara na Europe nke ga-ebuli Alaeze Ottoman? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 September 2019	• 10 Comments
Echere m na ọ bụ ihe egwuregwu mgbe onye na-agụ bipụtara nzaghachi ndị a: "Ọ bụ onye Turk." O juru m anya na otu mpempe Wikipedia sochiri gosipụtara na Boris Johnson nwere ndị nna ochie Ottoman n'ezie. Ọbụghị naanị ndị nna nna Ottoman ọ bụla; anyị nwere ike ikwu n'ụzọ doro anya banyere ndị nna nna nwere ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Johnson si n'otu ọbara dị ka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ottoman Ali Kemal. Nchọpụta na-atọ ụtọ, n’ihi na ọ na-akwado amụma m banyere alaeze ukwu nke ọchịchị ndị Ottoman n’oge na-adịghị anya. Kwe ka m kọwaa nke a.
Alaeze Ottoman aburula ndi mbu n’uwa wee hu onwu ya na erughi otu nari afo gara aga. Kemgbe ọtụtụ afọ, m na-anwa igosi na saịtị ahụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile akwadola maka omume ha niile na-arụkwa ọrụ maka njikọta ijikọ ụwa ọnụ. Ya mere obughi ihe ijuanya na anyi huru ugbua sitere n’umu ndi ezi ndi Ottoman na-akwado maka ogbaaghara Yurop (site na ihe ojoo Brexit) site na alaeze Ottoman ga-agbake. Anọ m na-ebu amụma banyere nlọghachi nke Alaeze Ottoman ihe dị ka afọ ise ebe a, dịkwa ka m si ele anya, isiokwu kachasị eleghara anya na mpaghara a na-akpọ eziokwu.
Naanị obere ndepụta nke Wikipedia peeji nke si Ali Kemal:
Ali Kemal Bey (Ottoman Turkish: عَلِي كمال‌ بك; 1867 - 6 November 1922) bu ihe Ottoman-Amụrụ nwa akwụkwọ akụkọ Turkey, onye editọ akwụkwọ akụkọ, onye na-ede uri na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mbinye aka na-akwụghị ụgwọ, bụ onye nọrọ ọnwa ụfọdụ nke Mịnịsta nke ime obodo n'ọchịchị Damat Ferid Pasha, Grand Vizier nke Alaeze Ottoman. Egburu ya n'oge agha nnwere onwe nke Turkey.
Kemal bụ nna Zeki Kuneralp, onye bụbu onye nnọchi anya gọọmentị Turkey na Switzerland, United Kingdom na Spain. Na mgbakwunye, ọ bụ nna ochie nke onye nnọchi anya ala Turkey Selim Kuneralp, yana onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Britain Stanley Johnson. Site na Stanley Johnson, Ali Kemal bụ nna nna ochie nke Minista Minista Britain Boris Johnson, yana Jo Johnson (MP maka Orpington), onye nta akụkọ Rachel Johnson, na onye ọchụnta ego Leo Johnson.
Na Ottoman Turkish ụdị aha a, Ali Kemal bụ aha enyere, na enweghị aha ezinụlọ.
Achọrọ m ime ka echiche ikpeazụ ahụ pụta. Anyị maara na ndị ọchịagha anaghị egbu oge ịgbanwe aha ha na ndị otu a na-ezuru onwe ha n'etiti ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nkịtị (lee ọmụmaatụ isiokwu a). Ya bu na United Kingdom na-achikota onu ogugu agha nke ndi German (dika Netherlands). .Lọ ahụ Saxony-Coburg na Gotha (Saxony-Coburg-Gotha) bu eze ndi German nke ndi otu ya chịrị obodo dị iche iche na Europe. Ulo ndi sitere na ulo ulo nke Saxony-Coburg-Saalfeld (site na ulo Wettin), nke nwetara Saxony-Coburg na Gotha nke abuo na 1826. Na narị afọ XNUM-X, enyere ụmụ sitere na usoro a si obodo dị iche iche. Na 19, Eze George V gbanwere aha ezinụlọ ndị Britain gaa Windsor. Ndị mgbasa ozi na-agbasa echiche na ndị na-ahụ maka echiche ha na-ahụ na anyị na-echefukarị ozi a niile, ka ndị mmadụ ghara ịghọta na ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ihe dị mma nakwa na ndị ochie ochie na-achịkwa ọchịchị ka na-achị. Ha bụ ndị na-echekwa edemede edemede.
Brexit debacle bụ akụkụ nke edemede ukwu; edemede nke ekwuputara n’etiti ihe ndi ozo na amuma nke okpukperechi. Site na nkwupụta Balfour na 1917 na mmebi nke Alaeze Ottoman, atọrọ ntọala maka ntọala nke ala Israel. Agha ụwa nke abụọ dị mkpa iji mezuo nke a, yana oke ụgwọ arụmọrụ dị ka akwụkwọ ikike maka nguzobe steeti Israel na 1948. Site na mmebi nke alaeze Britain mgbe nke ahụ gasịrị na mbibi nke ndị ochie ahụ niile, ike agha gaa na US nwere ike ime ma webata ndị ochie ochie niile na nzuzo n'okpuru ezinụlọ ndị Britain, yana US dị ka ọnọdụ ọjọọ nke okpueze Britain. Ọchịchị ukwu ala America a (nke na-atụ ụtụ isi ala nye ndị Britain) na-aga ịda. M buru amụma kemgbe ọtụtụ afọ na alaeze Ottoman ga-agbake. Nke a nwere ihe niile metụtara edemede edemede, nke agha ga-ebu agha maka Jerusalem n'etiti okpukperechi ụwa abụọ buru ibu. Maka nke a, Jerusalem buru ụzọ bata n'aka ndị Zionist ya mere agha ụwa nke mbụ na nke abụọ sokwa n'ihe ederede. Agha nke ụwa nke atọ bụ ihe ọzọ na-ekwu okwu ya.
Iji mezuo ihe nke atọ a, a ga-ebu ụzọ ọgba aghara na Europe.
'Ordo ab Chao' bụ Latin maka 'ịtụ nke ọgba aghara', maxim nke etinyere kemgbe na-echeta oge iji nwee ike ijide ọchịchị ugboro ugboro. Ọ bụ asịrị site na Freemasonry, nke kewara na gradations. Ọnọdụ kachasị elu n'etiti ọha mmadụ ahụ nzuzo bụ 33. Anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ ahụ ọtụtụ na ihe omume dị mkpa ma ọ bụ ihe omume dị iche iche ha nwere mkpịsị aka. A na-elekarị ọrụ ndị otu nzuzo anya ma ọ bụ na-eleghara ya anya dị ka usoro izu nzuzo, mana ọ bụrụ na anyị na-eleba anya na ụlọ ndị eze, anyị na-ahụ ókè mkpa ha dị 'n'iwu' ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ndị Orange bụ ndị ama ama na Ọchịchị Malta (ọha mmadụ, akụkụ nke ezinụlọ ezinụlọ nke ọha mmadụ nzuzo).
Ndị otu nzuzo bụcha ndị pharaonic ma ọ bụ Babilọn na okike. Yabụ nke ahụ laghachiri na gọọmentị ndị mbụ nke hiwere Pyramid sitere na mbụ "mmepeanya" mbụ. O yiri ihe siri ike na n'ime ọha ndị a nzuzo enwere (njikọta) ngalaba nke ọbara pharaonic nke na-ejigide usoro ọmụmụ ha site na ịlụ di na nwunye.
"Ordo ab Chao" bụ ntụ ntụ nke Scottish Rite Freemasonry. Okwu Bekee ‘Scottish’ sitere na Greek ‘skotiā’ (nnweta nwanyị nke skotios, ọchịchịrị, nke ndò, site na ndò ahụ ọ tụpụrụ, skotos, ọchịchịrị). Could nwere ike ikwu na ọ bụrụ na 'skotos' na-anọchite ọchịchịrị na ndò, na 'skotiā' nọchiri anya ìhè ahụ. Ọ bụrụ na anyị mechara chọpụta na Freemasonry bụ Luciferian, yabụ na ọ ga-abụ ọkụ ọkụ nke Luciferian. E kwuwerị, Chineke kwuru na 'ìhè dịịrị' yabụ enyo enyo wee mee ka onyinyo ahụ pụta. Nke a na-echetara egwuregwu Playstation agbanwuru, nke mere na onyinyo ahụ gosipụtara na ihuenyo n'ụdị pikselụ ọkụ (lee. usoro nkoghari).
Templelọ temple nke Venus Scotia dị na Egypt oge ochie. A na-ekwu na obodo Scotland weghaara aha ya n'aka eze nwanyị pharaoh nke Egypt nke aha ya bụ Scota. N'ebe ahụ anyị hụrụ njikọ ọzọ na otu n'ime mmepe obodo kacha ochie, ya bụ Egypt. Mkparịta ụka nke alaeze bụbu, Babilọn ma ọ bụ Egypt, eyighị ka ị meriri kpamkpam ma ọ bụrụ na igwu omimi, mana isi okwu ya bụ na ọha mmadụ nzuzo yiri ka ọ nwere njikọ nke ndị pharaoh nke oge ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, o doro anya na ọ dị ka alụm di na nwunye na-eme atụmatụ n'ime òtù a dị na ọbara. Ihe nsogbu bu, bu na n’oge ugbua ihe nile kpochapuru tebụl dịka akụkọ ụgha ma ọ bụ akụkọ izu nzuzo, nke mere na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-elele ya anya. Achọghị m inye nsogbu ebe a. Gughari onwe gi ichoputa otu ndi ogugu n’aluru di na nwunye n’abughi oge nke ihunanya, kama na ndabere nke imezu.
Albert Pike bụ onye dị mkpa site na Scottish Rite Freemasonry. Ọ bụ onye kachasị elu nke ebutere ma nwee akara ngosi 33. Dị ka akụkọ ihe mere eme si kwuo, Pike bụ onye agha na agha Mexico na America, ọkàiwu, onye na-ede uri nakwa onye òtù KuKluxKlan. Pike ngwa ngwa toro n'ime Isi nke Kasị Elu n'ime òtù a. O weghachiri ma kọwapụta ememe Masonic ma mepụta akwụkwọ mbụ nke nkà ihe ọmụma Morals na Dogma nke Ancient na anabata Scottish Rite nke Freemasonry, akwụkwọ na-adọrọ mmasị na nzukọ ahụ. Ncheta Ememe Pike bụ naanị ihe a na-eme n'èzí na Washington DC maka nkwanye ùgwù nke General Confederate General. Ihe ncheta a bụ otu n'ime ihe ngosi 18 nke Agha Obodo na Washington, DC, nke edekọtara ọnụ na 1978 na National Register of Historic Places. N'ihi ya, Pike yiri onye dị oké ọnụ ahịa bụ onye nọ na nwata nke nnukwu obodo Amerịka (nke dị ugbu a) na anyị maara ugbu a.
Agaghị ekwupụta Freemasons ọrụ dị mkpa na akụkọ ihe mere eme. Ha na-arụ ọrụ dị ka ọ dị na okirikiri ma ga-egwu oge niile mkpa ha (n'ọhịa a na-ahụ anya). Can nwere ike ịtụle nke a ugbu a, nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi gosipụtara ụlọ ndị eze dị ka ụlọ ọrụ emume nke ndị gọọmentị onye kwuo uche ya gbochiri ikike ya n'ezie (nke a bụ n'ezie). Yabụ ọ bụrụ na ịchọọ Wikipedia maka agụ akwụkwọ gọọmentị ndị a kpọtụrụ aha, ha enweghị ọrụ dị mkpa dị otú a. N'ihe atụ niile anyị na-ahụ gburugburu anyị, agbanyeghị, anyị nọ na akara ngosipụta nke freemasonry (Max Verstappen, ọ dịghị. 33, dịka ọmụmaatụ, na chessboard na Formula 1 ọkọlọtọ). Ndị Freemasons na-egosi na ha na-achị achị, mana imirikiti ahụ kpuo ìsì.
Na 1871, Albert Pike dere akwụkwọ ozi ya na onye na-asụ Italian Freemason Giuseppe Mazzini. N'akwụkwọ ozi a, ọ buru amụma ụwa atọ. Nke nke mbụ na abụọ na-ederede kpamkpam. Gụọ nsụgharị nke akwụkwọ ozi ahụ n'okpuru:
A ghaghị ime Agha Ụwa Mbụ ka Illuminati kwụsị njedebe nke Czars dị na Russia ma mee ka ndị Kọmunist na-ekweghị na Chineke dị. A ga - eme ka ọdịiche dị n'etiti alaeze ndị Britain na nke German dị iche iche site n'aka ndị ọrụ nke Illuminati ma jiri iwu agha a. Ná ngwụsị nke agha ahụ, e wuru ọchịchị kọmitii ma jiri ya mebie ọchịchị na okpukpe
Agha agha nke abụọ aghaghị ịmalite site n'iji ọdịiche dị n'etiti ndị fascist na ndị Zionists na-eme mgbanwe. Agha agha a aghaghi imejuputa atumatu ibibi Nazism na ijide n'aka na nzuko ndi ozo di ike iji guzobe ala eze Israel na Palestine. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, ndị ọchịchị mba ụwa ga-etolite ike dị ka counterweight na Iso Ụzọ Kraịst, rue mgbe anyị nwere ike iji ụdị ndị a maka ọdachi ọjọọ.
Agha Agha Ụwa nke atọ aghaghị ịchọrọ (site n'aka ndị ọrụ nke "Illuminati") site na esemokwu n'etiti ndị Zionist ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị isi nke ụwa Islam. A gha agha agha agha n'ụzọ dị otú a na Islam (mba Arab Arab) na Zionist ndọrọ ndọrọ ọchịchị (mba nke Israel) na-ebibi ibe ha. Mba ndi jikoro na agha a ka agujuju anya n'aru aru, n'omume, nke ime mmuo na nke aku na uba. Anyị na-ahapụ ndị mmadụ na ndị na-ekweghị na Chineke na anyị ga-akpalite nnukwu ọdachi. Anyị ga-ahapụ okpukpe na-ekweghị na Chineke na nchịkwa n'ụwa. Anyị ga-egosi egwu ya. Ha bụ ihe kpatara anụ ọhịa n'etiti ndị mmadụ. Mgbe ahụ, ndị mmadụ ga-alụ ọgụ n'ebe niile megide ndị ka nta, a ga-ehichapụ ndị na-ekweghị na Chineke ekweghị na Chineke ma kpochapụ ndị na-ebibi obodo. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-emechu ihu na Iso Ụzọ Kraịst. Uche ha agaghi ama ntuziaka ma o bu ihe omuma. Ha ga-achọ ogologo. Ha ga-achọ itinye uche ha n'ihe banyere ihe. N'ikpeazụ, ezi Ìhè nke Lucifer ga-egosi ndị na-ege ntị. Ngosipụta nke Lucifer ga-esochi mbibi nke Iso Ụzọ Kraịst na ekweghị na Chineke, nke a ga-ekpochapụla n'otu mbibi.
A na-ekwukarị na akwụkwọ ozi a bụ ihe atụ, n'ihi na enweghị ike ịmara okwu "Nazism" na 1871. Ihe a na-eleghara anya na ebumnuche ahụ bụ na ndị mepụtara edemede nwere ike ibute usoro tupu ọha mmadụ amara okwu ndị a. Yabụ ọ bụrụ n’itinye aha ọhụụ na ahịa dịka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahịa ga-achọpụta ya ngwa ngwa karịa ka ọha na eze ga-ahụ nke a. Ọ dị mma, ọ bụrụ na Pike kọwara ederede (amụma) na ibe ya Mazzini, mgbe ahụ enwere ike ịnọ na ya nke ọha na-amaghị ruo mgbe ọtụtụ afọ gachara.
O yiri ka a na-ezube ụwa nke atọ. Nke a, na mberede, na-adaba na foto nke amụma nke isi okpukpe ụwa, nke yiri ka ọ na-emegiderịta onwe ya (dualism), kama ọ yiri ya na oge usoro oge (lee ebe a). Dịka ọmụmaatụ, ma ndị Alakụba ma ndị Kraịst na-atụ anya ka mgbochi Kraịst (Dajjal na Islam) nke ga-egosi onwe ha dị ka onye ndú. Na-atụ anya na nloghachi nke Jisos (lee ihe atụ nkọwa a site na Sheikh Imran Hosein). Ndị Juu na-atụ anya na ndị ndú na Jerusalem na-arụ ọrụ kachasị mkpa n'ime okpukpe ndị a nile. Ntọala nke steeti Israel jikwa nnukwu ọrụ na agha ụwa abụọ mbụ, ọ bụ ezie na nke a emeela ka ọ bụrụ ihe masịrị na akụkọ ihe mere eme nke ndị ọchịchị. Na agha ụwa mbụ, a debere ala maka ala nke Israel na Nkwupụta balfour. Na Nkwekọrịta nkwekọrịta site na 1933 ọpụpụ ndị Juu na Palestaịn ka e dekọrọ na Germany. Ala nke Israel tọrọ ntọala obere oge mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị. Agha Ụwa nke Abụọ rụrụ ọrụ dị mkpa na nke a.
Nke atọ agha ụwa ga-ahụ, dị ka akwụkwọ ozi Pike si kwuo, ga-esite na esemokwu dị n'etiti ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Zionists na ndị isi nke ụwa Alakụba. Ọ bụrụ na anyị na-eleba anya na amụma amụma nke okpukpe, anyị na-ahụ Jerusalem na-ebute ụzọ. Owuwu ulo ikwasi ulo nke Solomon agha gesi oru di nkpa na nke a dika amuma nile nke oge ndia si n’uzi okpukpe ndia kwuru. Etuputara iwughari ulo uku ahu na amuma ndi ahu dika ihe nlere anya nke ọbia-agha nke Kraist, nke n’onwe ya bu ihe iriba ama na agha gaje iburu agha n’uwa nile. N'ụzọ dị ịtụnanya, odeakwụkwọ ukwu nke America Mike Pompeo gara catacombs n'okpuru ụlọ alakụba nke ewuru ugbu a na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nsọ a (ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Zionists?) N’oge na-adịbeghị anya. O si otua lelee ihe nlere anya nke temple a (lee ebe a). Ma akwụkwọ ozi sitere n'aka Albert Pike, na amụma amụma oge ikpeazụ, yana ihe ịrịba ama na-egosi na ihe ga-eme na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a, na-egosi na anyị na-ahụ nnukwu edemede. A akwukwọ nke ndi ndu nke obodo nzuzo mara, dika nke 33.
Anyị nwere ike ikwu na pharaoh bloodlines maara ederede na ọbụna duzie mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya dabere na edemede a. Ihe dị mkpa ha lekọtara bụ 'Ordo ab Chao'. Ọ bụ ya mere anyị nwere ike iji kwuo hoo haa na ha na-ebu ụzọ akpata ọgba aghara iji nwetakwuo ikike. Ọ bụ ya mere m ji buo amụma na Brexit na-agbaso edemede a nakwa na ọ bụ ihe ga-emebi ya enwekwu ike n'akuku ogwe aka nke islam site na leta nke Pike. Na isiokwu a Akọwalarị m otu m si na-ebu amụma ọtụtụ afọ na alaeze Ottoman ga-agbake na otu a ga-esi jiri Brexit kpalite ọgba aghara na Europe. Yabụ na Boris Johnson nwere ike ịbụ obere nwa sitere n'ọbara ọbara pharaoh dị otú a. Anam ewere onodu ndi mmadu niile anyi huru na ndoro-ndoro ochichi na ndi mgbasa ozi nwere ebe ha si puta, na ha aghaghi itinye onyinye nzuzu na mmezu nke ihe ode akwukwo.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: wikipedia.org
Erdogan na-akpọ ụwa islam ka ha dịrị n'otu
Mwakpo ikpe ikpeazụ nke Alaeze Ukwu Rom nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ na-eji aka agha agbanye Venezuela
Sheikh Imran Hosein na-ebu agha maka Constantinople (Istanbul)
Tags: mbido, ụmụ, Boris, Brexit, agba, Johnson, Ottoman, Ottoman, ọgaranya, Turks, Turkish, Ndi Zion
JtheRed dere, sị:
Daalụ maka ọrụ gị niile.
Enweghị m n’aka ma ọ bụrụ na ịnụtụbeghị banyere Sheikh Imran Hosein. Ọ na-ekwu kemgbe ọtụtụ afọ ihe dị mkpa nke Constantinople na njedebe oge na otu Chọọchị Ọtọdọks na Ala Ala Ala Ọchịchị ga-ahazi, nakwa na mgbe akpọghachịghachi Constantinople bụ oge mgbe Al-Masih ad-Dajjal (“Mesaya ụgha, onye ụgha. , onye nduhie ”) na nkuzi alakụba ga-alaghachi. Lee vidio a ma ọ bụ ya na-ekwu maka ya.
Ọ bụrụ n’ịchọọ Onye isi Ala Imran Hosein n’edemede a dị n’elu, ị ga-ahụ na m na-atụgharị ya n’otu edemede a.
Kpamkpam kwenye na nyocha a magburu onwe ya! N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba a ka na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ iji mee ka ọ tinye ya na oge a kara aka. Anyị na - ahụ ugbu a ihe ịrịba ama niile na - eme, dịka ọmụmaatụ itinye nke onye omekome ọ mara ikpe ka ọ bụrụ onye isi ECB. Anyị agụpụtala n’usoro mgbasa ozi na amụma azụmaahịa ECB arụbeghị ọrụ nakwa na o meela ka Euro bụrụ ihe na-adịghị mfe. Nke a bụ ebumnuche ziri ezi nke mkpuchi nzuzo, ịhapụ ihe niile n'otu oge ...
Agbazekwa nke ọma dere, sị:
Abum onye amuru ohuru nke Kraist, amurum na i kuziri m ihe ndia niile Ihe ngosi n’emeela ka m buru ogharii na onu ogugu ndi m kwuru ma mara na ndi n’aru oru oma na Freemasonry, bu kwa agwa ha na obi ojoo. Enwere ike ịkụ smịiko site na ibe site na 3 mita ma kpee ụbọchị niile maka mkpụrụ obi ha "na-eche naanị onwe ha" tupu ịnakwere akara nke anụ ọhịa ahụ!
Ihe 1 adighi nma n'anya m, O buru na I na egosi mgbe nile na usoro nke Luciferian ezighi ezi, kedu ihe kpatara i jiri detuo ya n'echeghi eche? ihe odide ahụ abụrụla ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụ "atụmatụ atụmatụ" nke Setan (onye na-adaghị onwe ya na ndị ikwu ibe ya, kama a na-akpọ ya Lucifa) imebi Chineke na ihe ndị o kere, ma ọ bụrụ na i kwuola onye dị ka Pike ihe nọ na ịrị elu, ọ pụtara na ọ “na-atụgharị” ihe na-aga ime, dịka atụmatụ ụwa si dị, ma hapụ Setan ka ọ bụrụ onye nwere ụwa niile.
Ana m adụkwa gị ọdụ ka ị gafee oge Mesopotemia nke "tupu iju mmiri ahụ", Ọ bụrụ na ị lelee disinfo (anyị dị ọtụtụ nde afọ, ọnwa ga-abụ mpempe nkume nke anyị rutere na lol) mgbe ahụ amaara m nke ọma. na ị gaje iru elu dị elu, achọpụtara m ọtụtụ mmụọ nsọ n'ime gị Martin, Atụrụ m anya na nkwupụta m ga - eme ka ị lee ntakịrị dị iche na otu narị afọ nke 21e (asị, asị ma yie egwu) Ndị Kraịst lere ya anya, Abụ m abụghị Katọlik, Reformed wdg, n'ụzọ nkịtị "Mụrụ
Site na nkwenye gị dị ka Christian, Aghọtara m azịza gị, mana a ga m arịọ gị (na onye ọ bụla na-agụ nke a) ka ị gụọ akụkọ a nke ọma, ka ị ghọta nke ọma ka esi etinye okwu 'Setan' na 'Lucifer':
Tupu ị zaghachi ọzọ m ga-achọ ịrịọ gị ka ị gụọ nke ọma ma gụọ amaokwu niile dị n'okpuru njikọ na-acha anụnụ anụnụ. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-aga n'ihu ịkọ nkọ okwu nke Babilọn.
So nu !!! Na PC, Mobile 2x mebiri ihe m chọrọ ide!
N'aka nke ahụ, edere m ezigbo akwụkwọ m na-agaghị achọ ịmaliteghachi na nsọpụrụ niile. N'ụzọ ziri ezi na enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ okwu mkparị, emekwara m ya (ikekwe "ha" emezuworị ihe, ngosi?)
Aghọtara m ebe i si n’ihi na ị makwaara omenaala ha, mana mara onye iro gị, e don'tomiekwa ha, Ihe ọ bụla ‘ha’ kpọrọ asị, juo ya, na-enye ntụgharị dị iche karịa nke Chineke zubere, mgbe ahụ ntụgharị na-abụkarị eziokwu , Onu ogugu ndi nlere anya "Demiurge" n'oge na-adịbeghị anya na -echebe Chineke bụ ihe, Ihe na-efe efe dị ka Endgame Marvel wdg (Endgame bụkwa nnukwu isiokwu ugbu a n'ihe niile)
Ewela iwe na ihe ndi ozo adighi adi ugbua, ahutara m oru gi n’aho a mgbe m nuru ka onye Bekee na ekwu okwu na “Dome of the rock” n’agba oku n’otu oge ka Notre Dame (ma ugbua ma anyi gha achoputa ya. “ihe omume” na-abịanụ ma ọ dịghị onye ọzọ karịa weebụsaịtị Arabic ma ị gbagoro site na "Google" ma ọ bụ ebe niile! Obi siri m ike ịgaghachi na ọ bụ unu duziri nwanyị ahụ na “Nlekọta Ndị Ntorobịa” ebe m kwenyere na a na-ejide omume MKULTRA site na mmekpa ahụ nke uche, ha nwekwara nnukwu njirimara ihe atụ na na ụlọ ha, ugbu a enwere ọtụtụ ọnọdụ. bụbu ndị Katọlik ma ndị "ụka" na-eduzi
(Ama m onye mara gị kemgbe ọtụtụ afọ !!!! 111)
Maka ndị nwere anya ịhụ, ọnọdụ geopolitical niile doro anya dị ka iko.
Nkwupụta Nkwado A na-akwadebe Dollar US Topple?
Okwu na-enweghị atụ nke onye isi ọpụpụ nke Bank of England na ndị ọzọ na-abanye n'ime ụlọ akụ etiti na-atụ aro siri ike na enwere ọnọdụ jọgburu onwe ya na ọrụ iji kwụsị ọrụ US dollar ka ego ụwa chekwaa. N'ime usoro a, nke a ga-emetụta Fed ma ụma kpata ndakpọ akụ na ụba dị egwu. Ọ bụrụ n’ezie ekpesara ọnọdụ a n’e ọnwa ndị na-abịanụ, Donald Trump ga-agbadata n’akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dị ka Hebert Hoover nke abụọ, akụ na ụba ụwa ga-abanye na mbibi kachasị njọ kemgbe ndị 1930. Lee ụfọdụ ihe ekwesịrị ịtụle.
Bank England okwu
Onye isi ga-ala ezumike nká nke Bank Bank England pụrụ iche, Mark Carney, kwupụtara okwu dị ịrịba ama na nzukọ nzukọ kwa afọ nke ndị isi ụlọ akụ na ndị isi ego na Jackson Hole Wyoming na August 23. Adreesị peeji nke 23 nye ndị banki etiti na ndị na - akpata ego bụ ihe mgbaàmà doro anya ebe ebe Ndị Ọchịchị Na - ahụ nke na - elekọta ụlọ akụ etiti ụwa na - eme atụmatụ iweghara ụwa.
N'otu oge ahụ, a na-edobe akwa mkpuchi maọbụ n'ụdị Brexit, agha a na-akpọ agha na ọgụ na-arịwanye elu n'etiti Israel na Iran.
Ndị bụ ezigbo ọrụ maka nke a na-anọchite anya ike n'ọhịa a na-ahụ anya ma, dị ka o kwesịrị ndị ụkwụ dị mma, na-ahụ ọrụ izizi ha nke ọma n'ọhịa a na-anaghị ahụ anya. Iji maa atụ ego abụọ BIS a…
salmon nke oma ekwesighi ibia ya ihe ijuanya na draghi gha ahapụ ụgbọ nke uru na-adịghị mma dịka nke 31 October (Brexit).
"Mario Draghi hapụrụ 31 n'ọnwa Ọktọba dịka onye isi oche nke ECB."
ya mere klaasje amaliteworị ikpuchi onwe ya, enwere ọbụna akwụkwọ ozi zigara super mario .. nke omume. Mana ihe hapụrụ bụ na ha na-ezukọta onwe ha na nzuzo kwa ọnwa na Basel…
" Ihe ojoo Brexit aburula uzo atumatu
NOS na RTL na-elebara omimi miri emi anya iji mepụta ihe omimi nke aka ha »
Nleta ha: 4.081.670